हिउँ खेल्न कालिञ्चोक जाँदै हुनुहन्छ ? पहिला होटल बुक गर्नुहोला | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर हिउँ खेल्न कालिञ्चोक जाँदै हुनुहन्छ ? पहिला होटल बुक गर्नुहोला
हिउँ खेल्न कालिञ्चोक जाँदै हुनुहन्छ ? पहिला होटल बुक गर्नुहोला
कालिञ्चोक कुरी बजार
पुस २८, दोलखा । शुक्रवार कालिञ्चोकमा रहेका होटलहरुले पर्यटकलाई वासको ब्यबस्था गर्न नसकेपछि चरिकोटमा पठाएका थिए । चरिकोटका होटलहरु दिउँसै भरिसकेका थिए । देशका विभिन्न स्थानबाट चरिकोट आएका पर्यटकहरुले साँझसम्ममा स्थानीय सातदोबाटो चोकमा रहेका होटलसमेत भरिसकेको थियो ।
आन्तरिक पर्यटकको भीड बढेसँगै यहाँका होटलहरु एक साता अगाडिबाटै बुक हुन थालेका छन् । सिधै कालिञ्चोक र चरिकोट जानेहरुले होटल नपाउँदा निरास देखिन्थे । होटल नपाएका कारण कतिपय पर्यटक राति नै मोटरबाट काठमाडौं तर्फ पनि लाग्नु पर्यो ।
हिउँ पर्ने सिजन शुरु भएसँगै दोलखामा आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप होटलहरुले थेग्नैं नसक्ने गरी बढेको छ । दोलखाका कालिञ्चोक लगायतका ठाउँहरुमा हिउँ परेसँगै कालिञ्चोक घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
होटल पावनका संचालक गौरी शाहीले ४ दिन अगाडिनैं होटल बुक भइसकेकाले आफूले अतिथिहरुको सत्कार गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । पावन होटलमा पुगेका तीन सयभन्दा बढी मानिस स्थान अभावका कारण फर्काउनु परेको उनको भनाई छ । “कम्तिमा होटल बुक गरेर आएको भए उहाँहरुलाई कष्ट हुने थिएन,’ शाहीले भनिन् ।
पावन मात्र होइन सदरमुकाम चरिकोटमा रहेका ७० भन्दा बढी होटलहरु सबैको हालत यस्तै थियो । कालिञ्चोकका होटलहरु सातदिन भन्दा बढीका लागि बुकिङ भइसकेको कालिञ्चोकका होटल संचालकहरुको भनाई छ । बिदा मनाउन आएका आन्तरिक पर्यटकहरु चिसोमा राति अवेरसम्म वासको खोजिमा भौतारिइरहेका देखिन्थे ।
आफूले एक हप्ता अगाडि नै बुक गरेकोले होटल पाएको तर, यति भीड होला भन्ने आफूले कल्पना पनि नगरेको काठमाडौंबाट आएका शिव महतले बताए ।
मध्यरातमा स्थानीय वासीन्दाको सहयोग :
होटल नपाएर आन्तरिक पर्यटक बाटैमा बिचल्ली भएपछि मानवीय भावनाले स्थानीय चरिकोटवासीहरुले अलपत्र परेकाहरुलाई आफ्ना घरहरुमा बास बस्न दिएर सहयोग गरेका छन् । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्कीका अनुसार चरिकोटका स्थानीय वासिन्दाहरुका घरमा राति १२ बजेसम्ममा पाँच सयभन्दा बढीलाई आश्रयको ब्यवस्था मिलाईएको थियो ।
स्थानीय वासिन्दाले आपतमा परेका पर्यटकलाई गरेको यो सहयोग आफूले विर्सन नसक्ने परिवारका सदस्य सहित दोलखा घुम्न आएका सिपाडोल भक्तपुरका भुवन केसीले बताए ।